University of Cambridge - Fianarana tany Angletera. Top universtiy UK
fanafohezan-teny : UoC
Créé : 1209
Aza adino ny midinika Oniversiten'i Cambridge
Misoratra anarana ao amin'ny Oniversiten'i Cambridge
The University of Cambridge dia Collegiate-bahoaka fikarohana universityin Cambridge, Angletera. naorina in 1209, Cambridge no faharoa-oniversite tranainy indrindra ao amin'ny tontolo miteny anglisy sy ny world'sfourth-tranainy indrindra sisa velona anjerimanontolo.N Ny oniversite nitombo avy amin'ny fikambanana ny manam-pahaizana, izay nandao ny University of Oxford taorian'ny fifamaliana tamin'ny Mampiaiky. Ny roa anjerimanontolo fahiny mizara lafin-javatra maro iraisana ary matetika no resahina miaraka toy ny “Oxbridge”.
Cambridge no namorona avy amin'ny andrim-panjakana isan-karazany, izay ahitana 31 -panorenana oniversite sy ny 100 akademika sampana Nalamina ho enina sekoly. Cambridge University Press, ny sampan-draharaha ao amin'ny Oniversiten'i, dia izao tontolo izao ny Trano Famoaham-boky tranainy indrindra sy ny faharoa-gazety oniversite lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ny anjerimanontolo ihany koa ny miasa ara-kolontsaina sy ara-tsiansa valo mozea, anisan'izany ny Fitzwilliam Museum, ary ny botanic zaridaina. Ny trano famakiam-boky Cambridge mihazona ny sokajy ny manodidina 15 tapitrisa boky, valo tapitrisa ny izay any Cambridge University Library, petra-bola ara-dalàna fitehirizam-boky.
Tamin'ny taona tapitra 31 Jolay 2015, ny oniversite nanana fidiram-bola tanteraka ny £ 1,64 miliara, izay £ 397 tapitrisa avy any fikarohana atolotry sy ny fifanarahana. Ny foibe oniversite sy ny kolejy manana mitambatra fanafiana masina ny manodidina £ 5,89 miliara, ny lehibe indrindra ny misy universityoutside ny Etazonia. Ny anjerimanontolo mifandray akaiky amin'ny fampandrosoana ny teknolojia avo-raharaha sampahom-boaloboka fantatra amin'ny anarana hoe “Silicon FEN”. Izy io dia mpikambana ao amin'ny fikambanana maro, ary tsy ampy ny ampahany amin'ny “telozoro volamena” ny mpitarika anglisy anjerimanontolo sy Cambridge University Health Partners, akademika tobim-pahasalamana momba ny siansa.
Cambridge dia foana laharana faha ho iray amin'ireo oniversite tsara indrindra eran-tany. Efa nahita fianarana ny anjerimanontolo malaza maro Alumni, anisan'izany ny mpahay matematika ambony, mpahay siansa, mpanao politika, lawyers, filozofa, mpanoratra, mpilalao, ary vahiny filoham-pirenena. Roa amby sivi-folo Nobel laureates sy Fields medalists no mpikambana ao amin'ny Cambridge ho mpianatra, sampam-pianarana, mpiasa na Alumni. Nandritra ny tantara, ny anjerimanontolo dia nasongadina ao amin'ny boky sy gazety ary asa kanto amin'ny alalan'ny mpanoratra ao anatin'izany Geoffrey maro Chaucer, E. M. Forster sy C. P. Snow.
Mihoatra noho ny 18,000 mpianatra avy amin'ny saranga rehetra sy ny vazan 'izao tontolo izao, efa ho 9,000 mpiasa, 31 Colleges ary 150 Departments, fahaizanareo, Sekoly sy andrim-panjakana hafa, tsy misy roa andro mitovy mandrakariva ao amin'ny Oniversiten'i Cambridge.
Tamin'ny ny fon'ny ity Konfederasionan'ny Departments, sekoly, -Misaina sy ny Colleges no fototry fitantanana ekipa. Izany dia satria ny Colleges kely dia tena fitondrana sy ny fampianarana mpiasa hanatanteraka betsaka amin'ny fitantanana isan'andro amin'ny Cambridge.
Ny University dia Konfederasionan'ny Sekoly, fahaizanareo, Departemanta sy oniversite. Ny Colleges dia fehezin'ny ny didy sy ny fitsipika, fa manontolo ny make-up ao amin'ny Oniversiten'i Cambridge.
mpianatra miaina, mihinana sy mifanerasera amin'ny iray amin'ireo University ny 31 mizaka tena Colleges. Undergraduates mandray College supervisions - tarika madinika fampianarana fivoriana - noheverina ho iray amin'ireo tsara indrindra fampianarana modely eto amin'izao tontolo izao.
Samy College anatiny manana ny fomba fiasan'ny. Izy ireo mifidy ny mpianatra, foto-kevitra ny University fitsipika, ary tena miaiky na undergraduate sy ny mpianatra, nahazo diplaoma teny. College solontenan'ny mipetraka eo amin'ny University sy ny Filan-kevitry ny Komitin'ny Vola.
Misy enina Sekoly, izay samy mamorona ny fitantanan-draharaha Grouping ny misaina sy ny andrim-panjakana hafa. Izy ireo dia: Zavakanto sy ny Humanities, niteraka Sciences, pitsaboana Medicine, Humanities sy ny Siansa Sosialy, Ara-batana Sciences, ary Teknolojia.
Misy Filan-kevitry ny Sekoly tsirairay - anisan'izany ny solontenan'ny ny misaina sy ny Departments. Ny sekoly dia solontena ao amin'ny Birao Foibe.
-Misaina sy ny Departments
University-misaina sy ny fikarohana mandamina fampianarana ho foto-kevitra na ny vondrona tsirairay ny foto-kevitra. Ny asa ara-dalàna voalamina ho zana-antokony antsoina hoe Departments.
CENTRES ny fanadihadiana dia fehezin'ny komity ny fitantanana, miara-mitondra solontena avy amin'ny maro fitsipika.
Faculty maritrano sy ny History of Art
Faculty ny any Azia sy Moyen-Orient Fianarana
Azia Atsinanana Department of Fianarana
Department of Middle Eastern Fianarana
Faculty ny Classics
Tranom-bakoka ny Classical Archaeology
Faculty ny maha-andriamanitra
Faculty teny anglisy
Departemantan'i ny Anglo-Saxon, Norse sy Celtic
Faculty ny Modern sy Moyen Âge teny
Department of alemaina & Anarana iombonana
Department of Italiana
Department of slavonika Fianarana
Departemantan'ny espaniola sy portogey
Departemantan'ny teorika sy Applied Linguistics
Modern teny grika
Centre for Research in Arts, Humanities sy ny Siansa Sosialy
Faculty ny Human, Ara-tsosialy sy politika siansa (HSPS)
Departemantan'ny Ny Arkeolojia sy Anthropology:
Leverhulme Centre for Human mino ny evolisiona Fianarana
Mongoliana sy Inner Aziatika Fianarana Unit
Museum ny Arkeolojia & anthropology
McDonald Institute for fikarohana ambanin'ny tany
Sampan-draharaha politika sy ny iraisam-pirenena Fianarana:
Centre de African Studies
Centre de Development Fianarana
Centre ny Amerika Latina Fianarana
Centre ny Azia Atsimo Fianarana
Tantara sy ny Filozofian'ny Siansa:
Whipple Museum ao amin'ny History of Science
Lauterpacht Centre for lalàna iraisam-pirenena
Institute ny heloka bevava
Centre for Family Fikarohana
Physiology, Development sy Neuroscience
Museum ny Haibiby
Wellcome Trust Centre for lafin'ny sela Fikarohana
Cambridge Systems Haiaina Centre (CSBC)
Faculty ny tany Sciences & jeografia
Sedgwick Museum ny tany Sciences
Applied ara-Matematika sy Fizika
Madio Matematika sy matematika Antontan'isa
Faculty fizika & Simia
Fitaovana Siansa sy mpampatsiro hanina
Isaac Newton Institute for matematika Siansa
Cambridge Centre for atidoha Repair
Wolfson Brain fitarafana Centre
Fanandramana Fitsaboana sy Immunotherapeutics (ataon-drizareo)
Brain saritany vondrona
fivoarana mpitsabo aretin-tsaina
Public Health & Kilonga Care
General Practice & Kilonga Care Research
pitsaboana ny fahanterana
Ratram-po sy ny Orthopaedic Fandidiana
Cambridge Institute for Medical Fikarohana (CIMR)
Energy, tsiranoka Mechanics, ary turbomachinery
Mechanics, fitaovana sy ny famolavolana
Asa famokarana sy ny fitantanana
Faculty ny Business & Management
Centre for Business Fikarohana
Faculty ny Computer Science & teknolojia
Sampan-draharahan'ny simika Engineering & Biotechnology
Cambridge Institute for fampandrosoana maharitra Leadership
Fikambanana tsy miankina na Sekoly
Centre Islamika Fianarana
Ny Oniversiten'i Cambridge manan-karena amin'ny tantara – ny malaza Colleges sy University trano mahasarika mpitsidika avy manerana izao tontolo izao. Fa ny University ny tranom-bakoka sy ny famoriam-bola ihany koa ny manana harena maro izay manome ny mampientam-po hahatakatra ny manam-pahaizana sasany asa, taloha sy ankehitriny, ao amin'ny University ny anjerimanontolo sy ny mpianatra.
Ny Oniversiten'i Cambridge dia iray amin'ireo oniversite tranainy indrindra eran-tany sady mitondra akademika foibe, ary ny tena mifehy fiaraha-monina ny manam-pahaizana. Ny mavesatra noho ny zava-bitany miavaka akademika dia fantatra maneran-tany, ary ahitana taratra ny zava-bita ara-tsaina ny ny mpianatra, ary koa ny izao tontolo izao-kilasy tany am-boalohany fikarohana ataon'ny ny mpiasa ao amin'ny University sy ny Colleges.
Maro ny fomba amam-panao amin'ny University sy ny voambolana mahazatra dia azo zohina ny fakany tany am-piandohan'ny taona ny fahari ny University tantara, ary ity boky kely mijery ny lasa mba hahitana ny am-boalohany ny be izay miavaka ao amin'ny University ny amin'izao fotoana izao.
Rehefa tonga voalohany manerana an'i Cambridge in-tsoratra firaketana an-tsoratra, dia efa nisy tanàna be. Ny tetezana manerana ny Ony Cam na Granta, izay ny tanàna nitondra ny anarany, efa nisy hatramin'ny fara fahakeliny 875. Ary ny tanàna dia foibem-barotra lehibe teo anatrehan'ny Domesday fanadihadiana dia natambatra tao 1086, izay fotoana lapan'ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fiakaran'ny tany ho any ny avaratry ny tetezana, ary nisy efa Mitana ara-barotra sy toeram-ponenana fananana ary koa ny fiangonana maro tao amin'ny tena ponenana izay nandry atsimon'ny ny tetezana.
Ao anatin'ny ny tanàna, na tena akaiky azy, nisy maro hafa andrim-panjakana ara-pivavahana. Nisy ireo Kanona ao amin'ny Fiangonana ny St Giles eto ambany ny lapa eo anatrehan'i 1112, rehefa nifindra tany amin'ny toerana vaovao manerana ny Reniranon'i Cam tao Ambatondrazaka, ary ny relijiozy ny St Radegund efa nisy hatramin'ny 1135 teo amin'ny toerana izay lasa i Jesosy tatỳ aoriana College. Nisy ihany koa ny roa hopitaly, iray natokana ho an'ny boka amin'ny Stourbridge, Ary ny faharoa, naorina ho an'ny paupers, ary nanolo-tena ho St John, izay aorian'ny 1200 nibodo ny toerana St John ny College izao mijoro. Fito ambin'ny folo kilaometatra avaratry ny tanàna dia lehibe Benoît taranak'i Ely izay, rehefa 1109, dia ny seza ny Episkôpà.
Tsy nisy be izao no hitondra clerks (mpitondra fivavahana) ny tanàna, fa ny mpivarotra ihany koa tia azy. taorian'ny about 1100 dia afaka tonga Cambridge mora foana amoron'ny ony rafitra izay notrohinao mbamin'ny faikany ny rehetra ny East Midlands, ary amin'ny alalan'ny Lynn sy Ely dia nanana fahafahana miditra amin'ny ranomasina. Be harena voangony tany an-tanàna, sy ny iraika ambin'ny folo lahy sisa velona Moyen Âge paroasy fiangonana iray, fara fahakeliny, ary tsara tarehy trano vato mbola ho porofo izany. Nisy tsena alohan'ny sakafo 1066, ary nandritra ny taonjato faharoa ambin'ny folo ny masera ny St Radegund Navela hanorina tsara tarehy teo amin'ny taniny ao amin'ny Tongolo Lane; ny Kanona ny Ambatondrazaka nanana tsara tarehy tamin'ny volana Jiona (taty aoriana Midsummer Fair), ary ny boka hopitaly dia nahazo ny zo hanao tsara tarehy, izay nivoatra ho any amin'ny tsara-fantatra sy maharitra Stourbridge Fair.
By 1200, Cambridge dia niroborobo ara-barotra ihany koa fiaraha-monina izay ny faritra tanàna ary nanana sekoly iray, fara fahakeliny ny sasany hafa. dia, in 1209, manam-pahaizana avy amin'ny fahavalo mialoka tananan'ny fireneko tany Oxford nifindra monina ho any Cambridge, ary nanorim-ponenana tao. Tamin'ny voalohany dia nipetraka tao faran'ny azo iakarana ao an-tanàna, fa amin'ny fotoana trano no nokaramaina toy ny tranom-bahiny amin'ny Tompo any niandraikitra ny mpianatra. By 1226 ny manam-pahaizana dia maro ampy nanangana fikambanana, mifanitsy amin'ny manam-pahefana antsoina hoe Chancelier, ary toa efa nanao fandaharana tsy tapaka ny fianarana taranja, ampianarin'ny ny mpikambana. Avy amin'ny voalohany nisy disadisa eo amin'ny tanàna sy ny mpianatra. mpianatra, matetika taona tokony ho efatra ambin'ny folo na dimy ambin'ny folo, matetika niteraka korontana; olom-pirenena ao an-tanàna, etsy ankilany, dia fantatry ny overcharge ny efi-trano sy ny sakafo. Mpanjaka Henry III nitondra ny manam-pahaizana eo ambany fiarovana toy ny tany am-boalohany toy ny 1231 ary nanao ho azy ireo mba ho voaaro amin'ny fitrandrahana araka ny tompon. Mandritra izany fotoana izany dia niezaka mba ho azo antoka fa nanana ampihimamba ny fampianarana, iray ihany ireo mba ho voasoratra eo ambany ny saram-pianarana ny ekena tompony dia mba havela hijanona ao amin'ny tanàna.
Ary ny mpianatra izay nirohotra nankeny amin'i Cambridge ela dia nandamina ny tetika ny fianarana araka ny endrika izay efa lasa fahita tany Italia sy Frantsa, ary izay mety ho fantatra any Oxford. Izy ireo nianatra voalohany ankehitriny inona no ho antsoina hoe ny 'fototra Mazava ho azy’ in-kanto – fitsipi-pitenenana, lojika sy ny kabary tsara lahatra – nanaraka taty aoriana ny rafitrisa, mozika, rafitsary sy ny astronomia, nitarika ny diplaoma ny mari-pahaizana licence sy ny tompony. Tsy nisy mpampianatra; ny fampianarana dia nitarika ny tompo izay efa tena nandeha namaky ny Mazava ho azy sy izay efa nekena, na fahazoan-dalana avy amin'ny tenany rehetra ny mpiara-miasa aminy (ny kolejy na oniversite). Ny fampianarana naka ny endriky ny mamaky sy manazava andinin-teny; ny fanadinana am-bava ireo fifanjihirana izay nandroso ny kandidà andiam-panontaniana na taratasy misy hevitra izay niady hevitra na nifamaly tamin'i mpanohitra zokiny kely ny tenany, ary farany ny tompo izay efa nampianatra azy. Ny sasany amin'ireo tompo, kanefa tsy mety rehetra, mandroso nankany amin'ny fampianarana amin'ny maha-Andriamanitra, Canon sy sivily lalàna, ary, kokoa zara raha, fanafody, izay nampianarina sy nandinika Toy izany koa ho an'ireo izay efa namaky ny Mazava ho azy ary ho tonga dokotera. Ny dokotera mivondrona ny tenany ho voafaritra tsara mandingana.
Tsy ela dia lasa ilaina, mba tsy fanararaotana ny mpanjaka tombontsoa omena ny manam-pahaizana, mba hamantatra sy manamarina ny olona izay nilazan'i ambaratonga efa nomena. Enrolment amin'ny tompony fahazoan-dalana no dingana voalohany mankany ity; dia nataony hoe matriculation noho ny toe-javatra izay ny manam-pahaizana dia tsy maintsy ho ny anaran'ny teo amin'ny tompony matricula na horonan-taratasy, fa tatỳ aoriana mihitsy ny University Nihevitra io andraikitra. Tena mahafinaritra mba hanamarihana ihany koa ny sehatra tao amin'ny manam-pahaizana ny fandrosoana amin'ny alalan'ny ny lanonana ny fieken-keloka (diplaoma) ny samy hafa naoty, na ambaratonga, ny maha-mpikambana. Ireo no omena ny tenany rehetra ny tompo, miaraka amin'ny Chancellor nampihatra ny fahefana ho azy, ho solombavambahoaka, ny Vice-Chancelier, tonga hanao taty aoriana. Ny naoty ny manam-pahaizana lasa karazany amin'ny alalan'ny andian-dahatsoratra ny fiovana eo amin'ny rebareba, nana sy Cap. Fampahatsiahivana ireo teny sy ny fomba fanao tafavoaka velona amin'izao fotoana izao.
The Regent Masters, izay ny fampianarana tena, Tsy ela dia hita fa ankoatra ny iray loha ireo fombafomba nila solontena hafa hiteny sy hanao zavatra ho azy ireo. Ny voalohany avy tamin'ireo no Proctors roa (ara-bakiteny ny solontenan'ny) izay voafidy isan-taona mba hifampiraharaha amin'ny ho azy ireo ny tanàna sy ny manam-pahefana laika hafa, hitandrina ny tantara, mba hiaro ny hareny sy ny boky, mba mahalalà onony amin'ny panadinana, ary ny manara-maso hafa rehetra lanonana. Ireo adidy ireo ela mba ho zaraina amin'ny mpiandraikitra voafidy hafa: Bedells, Tamin'ny voalohany ampiarahina ny toetsaina, no niahy ny lanonana; ary ny mpitaiza ara-panahy nandray anjara-raharaha ny harena sy ny boky. By ny fahenina ambin'ny folo Registrary taonjato iray ao matriculations, Admissions ny fiakarana, ary ny fanapahan-kevitra avy amin'ny Regent tompo, ny mpandaha-teny raha mbola nanoratra taratasy pomba sy ny adiresy. Ny ankamaroan'ireo anjara fanompoana ireo sisa ankehitriny, na dia ao amin'ny toe-javatra sasany ihany ho an'ny pomba tanjona.
Ny vondrom-piarahamonina toy izany fahasarotana ilaina fitsipika. Hatramin'ity farany ity, toy ny olana nitsangana, Didy no noraisin'ny ny tenany rehetra ny amin'ny University. Ireo no tsy nanao fandaharana voalohany na Hazavaina, fa ireo voalaza ao amin'ny boky napetrapetraka foana ny Proctors. Ny tranainy indrindra dikan ireo fanapahan-kevitra ny dika mitovy atao any amin'ny tapaky ny taonjato fahatelo ambin'ny folo, izay ankehitriny eo amin'ny Biblioteca Angelica tany Roma.
Ny ankamaroan'ny manam-pahaizana ny amin'ny University tamin'ny voalohany dia clerks na mpitondra fivavahana,amin'ny Filaharana ny karazana, ary miandry asa ao amin'ny Fiangonana na ao amin'ny Asam-panjakana (toy ny diplaomaty, mpitsara na ny mpiandraikitra ny ankohonan'ny mpanjaka). Mba hanohanana azy ireo nandritra ny taona maro ny fianarana, izy ireo nitady preferment ao amin'ny Fiangonana (ny mahasoa, ny canonry, na dia ny fahamendrehana amin'ny Katedralin'i), fa tahaka ny clerks voatendry tamin'ny voalohany izy ireo foto-kevitra ny manam-pahefana eo an-toerana Fiangonana, izay, ny Archdeacon sy ny Eveka ny Ely. Talohan'ny faran'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo, na izany aza, efa nanafaka ny tenany avy amin'izany, ary dia tsy miankina amin'ny Fiangonana rehetra, afa-tsy fahefana ny Papa. Ny Chancellor Lasa Fiangonana mpitsara tao an-jo, nandre ny raharaha mahakasika ny fitondran-tena na ny famaizana ny manam-pahaizana, ary naneho marimarina ny sitraponareo rehetra izay maty in-ponenana. Tamin'ny vanim-potoana momba izany, ny Chancelier nanome koa ny manam-pahaizana amin'ny fitsarana tsy ara-pivavahana mba izay afaka hampiasa noho ny fizahan-toetra rehetra sy ny mpanao heloka bevava sivily afa-tsy ireo tranga lehibe momba ny heloka bevava.
Ny satro-boninahitra nanampy ny University ny fahaleovan-tena. Tsy nampidirina fepetra mba hiarovana ny manam-pahaizana manohitra hitrandraka ny tananan'ny fireneko izay efa azony tsena sy ny sara zo izay nanampy azy mba hanangana ny vola vidin'ny sakafo, solika sy ny labozia. Mba hanoherana izany, ny University nomena ny zo mivoaka amin'ny lalàna manohitra tsena profiteers, ary ny hampihatra ny fitondran-tena ny assizes, na ny fitsapana, ny mofo sy ny Ale ny tanàna.
Ny fahazoana ireo hery mbola ho loharanom-disadisa eo amin'ny tanàna sy ny rebareba (ny University) hatramin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. More avy hatrany, dia nihevitra fa ny fanafihana tao amin'ny Oniversite fananana tao an-tanàna amin'ny 1381 ireo ampahany aingam-panahy lolom-po izany fitsabahana.
Raha izany no izy, ny fanafihana dia ratsy notsaraina, satria ho toy ny vokatry ny fanadihadiana Royal ho any an-korontana, ny University Nomena fahefana izay namela ny Chancelier tsy mba manenjika ny profiteers, fa koa ireo izay mameno ny lanja sy refy, mampidi-doza ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny ny adulteration ny sakafo sy zava-pisotro, manapaka ny fanampiana ny rano madio, na minia fampidirana aretina nandritra ny areti-mifindra 'aretina'. Fanaraha-maso ny mpivarotra koa dia navela ny Chancelier tamin'ny anie ny miadidy ny lalàna mandritra ny fitoriana atao hitsangana tsena sy ny entanao. Ny farany sisa tavela tamin'ireo zo ireo dia tsy hanjavona hatramin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, ary ny University mitana andraikitra sasany na dia ankehitriny aza mifandray amin'ny policing sy ny fahazoan-dalana.
Tamin'ny andro voalohany, ny University dia tsy nanana faritry ny ny azy: izany Niantehitra tamin'ny paroasy fiangonana, Lehibe indrindra ny St Mary sy St Benedict ny (na 'Bene't ny') ary ny faritry ny ara-pivavahana baiko, toy ny toerana noho ny fombafomba-bahoaka. Lectures, fifanjihirana sy ny faran'ny azo iakarana hita tao trano tsy miankina, izay matetika niova tanana, na niala tao fampiasana. Tsy ela dia nisy antokon'olona vitsivitsy Regent Masters, mpahay lalàna sy ny teolojiana, nanomboka nanao ny trano na hanakarama lehibe kokoa ho an'ny fampianarana sy ny hevi-trano nitoerany. Vitsivitsy ny amin'ny tranom-bahiny velona hatramin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo izy ireo matetika, rehefa nahazo izay tafiditra ao amin'ny faritry ny Colleges. Tsy toy ny Colleges, tranom-bahiny nanana fanafiana masina vitsy foana ka dia miankina.
Mandritra izany fotoana izany nandritra ny faramparan'ny taonjato fahefatra ambin'ny folo ary rehefa, ny University nanomboka hahazo fananana eo amin'ny toerana amin'izao fotoana izao antsoina hoe Loholona-House Hill, ary hanangana izany vondrona trano antsoina hoe 'sekoly’ – ny sasany izay tafavoaka velona amin'izao fotoana izao ho toy ny 'Old’ sekoly. Eto dia ny fampianarana ambony efi-trano ny fahaizanareo – ilay voalohany natsangana ho trano dia ny maha-Andriamanitra Sekoly – izay lahateny sy ny fifanjihirana no natao, ny trano fiangonana, ny trano famakiam-boky, ary ny fandatsahan-drakitra, sy ny tratrany sy ny muniments. Ny ankamaroan'ireo ny tany sy ny trano ao amin'ny tanàna mbola tany tsy miankina tanana, na ara-pivavahana tamin'izany ny trano, na dia avy amin'ny faramparan'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo no efa nandeha be ny andrim-panjakana vaovao antsoina hoe Colleges. Nanome ireo mpivavaka mpamatsy vola Colleges eo amin'ny toerana voalohany ho vitsy ny mpianatra efa mandroso ao amin'ny lalàna, na maha-Andriamanitra iza no hivavaka ho an 'ny fanahin' ny mpanao soa. Izany dia ny Colleges tatỳ aoriana fa ny tena tanora nampiantranoina undergraduates izay efa nitoetra teo aloha ao amin'ny tranom-bahiny na ny tsy miankina trano.
Ny voalohany i College St Petera na 'Peterhouse', naorina in 1284 ny Hugh Balsham, Bishop ny Ely. Mpanjaka Hall, 1317, natao noho ny mpanorina, Edward II, mba hanome zazavao ho amin'ny asam-panjakana ambony. Michaelhouse, Clare, Pembroke, Gonville Hall, Trinity Hall, Corpus Christi, mpanjaka, Queens’ ary ny nanaraka St Catharine nandritra ny manaraka 100 taona. Telo tara fanorenana, Jesosy, Kristy sy St John ny, nivoaka avy ny fandravana ny trano kely ara-pivavahana teo anatrehan'i 1520 ary, tahaka ny Mpanjaka Hall, nanome ho an'ny tanora manam-pahaizana ary koa ny 'post-nahazo diplaoma'.
Talohan'ny ny antenatenan'ny taonjato fahenina ambin'ny folo, ny Colleges nanomboka ny hilalao ny fanapahan-kevitra anjara amin'ny fiainana University. Izy ireo izao nanendry ny Proctors tsy ho eo ny mpikambana ao amin'ny isan-taona ho an'ny fotoam-piasana, ary ny lohany matetika nanompo ny Vice-chancelier sy ny zokiny mpitsabo ho mpikambana ao amin'ny filan-kevitra ny Birao Mpanolo-tsaina, izay tsy ho ela antsoina hoe ny Caput Senatus. Avy ny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny taonjato saika ny faran'ny ny faharoa-polo, Lohan'ny iray amin'ireo foana Colleges nihazona ny biraon'ny Vice-chancelier.
Ny iray amin'ireo tarehimarika ao Cambridge manan-danja amin'izao fotoana izao i John Fisher, izay misesy tompon Michaelhouse, Proctor, Vice-Chancelier, Chancellor (1509-35) ary Filohan'ny Queens '. Toy ny mpanolo-tsaina ny mpanjaka ny renin'i Henry VII, Lady Margaret Beaufort, izy no fitaovana ny fototry ny Kristy sy St John ny; Azo inoana fa zava-dehibe koa izy tsindrimandry ny fametrahana voalohany ny fanafiana masina fampianarana oniversite lahatsoratra, ny Lady Margaret maha-mpampianatra ahy ny maha-andriamanitra. Izy koa tia Cambridge maro ny manam-pahaizana – indrindra Erasmus ny Rotterdam – izay nampahery ny 'fianarana vaovao’ tamin'ny teny grika sy hebreo, manampy hanadio ny lalana ho ny antsasaky ny teolojika, antsasaky ny filozofia tombantombana izay namokatra ny fanavaozana ny fiangonana sy ny fandravana ny amin'ny monasitera.
Ny vokatry ny tany am-boalohany akademika sy ara-pivavahana tamin'ny taonjato fiovana mety hita eo amin'ny ara-batana endriky ny tanàna: lehibe College vaovao, Andriamanitra telo izay iray, dia naorin'i Henry VIII avy amin'ny trano kely roa ny Mpanjaka Hall sy Michaelhouse; Dr Caius malalaka Gonville Hall mba hanao azy io efa ho fototra vaovao, antsoina hoe Gonville sy Caius College, izay nibodo toerana lehibe ny Old akaikin'ny sekoly; Emmanuel hifantoka tanteraka ny Dominikana toerana, Sidney Sussex fa ny Franciscans, ary Magdalena hifantoka tanteraka ny teo aloha trano fianarana Benoît fantatra amin'ny anarana hoe Buckingham College. Ireo fototry vaovao ireo mikasika ny fanabeazana ny olona ho amin'ny fisoronana ao amin'ny Fiangonana-pirenena, fa izy ireo, ary indrindra fa Andriamanitra telo izay iray, nahasarika voalohany laika maro ny mpianatra.
Ny haben'ny ofisialy indrindra University Nitombo, fa ny fitambaran'ny mponina ny zatovolahy ao an-tanàna dia ahitana ireo izay tonga tany Cambridge, zavatra maro tsy mba toy izany ny fikasana ny taty aoriana diplaoma, fa ny soa avy amin'ny tsy ofisialy fifandraisana sy ivelan'ny fandaharam-pianarany dia asa, ary avy eo nandritra ny herintaona na mihoatra ho amin'ny tranom-bahiny ny Fitsarana any London. Ireo laika mpianatra, ny mpanompony, ary ny mpanjaitra, fencing-tompony, tenisy-kianja-mpiandry, mitaingina-tompo sy ny toy, izay tonga ny soa avy aminy, ataovy fanerena lehibe indrindra amin'ny zavatra ilaina sy ny sakafo velona-fitaovana tao an-tanàna sy namorona olana lehibe ny filaminam-bahoaka. Izany dia fotoana, rehefa tanàna-rebareba ny fifandraisana dia tena sahirana mafy.
Ny fiovan'ny toetry ny mpianatra vatana no hita taratra eo amin'ny fandaharam-pianarana. Henry VIII efa namoaka andianà miisa ho amin'ny University in 1536 hisakanana ny Faculty ny Canon Lalàna sy nandrara ny fianarana ny pianarana filozofia. Ny fianarana ny kanônan'ny lalàna nihena, ary ny teny grika sy latinina Classics, kajy sy ny fianarana Baiboly ankehitriny tonga teo amin'ny nanasongadina.
Ny fiovana ao amin'ny Anjerimanontolo dia Nihazona ny nifandimby Royal fitsaboana; ny ireo mpanjaka ireo mikasika ny anjerimanontolo toy ny mpamokatra ny hoavy mpitarika ny fiangonana nohavaozina, ary ny didy ny 1570 antoka izany. Nifantoka fahefana izy ireo tsy, tahaka ny teo aloha, ao amin'ny Regent Masters sy ny Proctors, fa ao amin'ny Vice-chancelier sy ny mpanapaka.
Ny fanafiana masina avy Henri VIII dimy professorships, ny Regius professorships ny maha-Andriamanitra, hebreo, grika, physic sy sivily lalàna, nanantitrantitra ny fiovana eo amin'ny fomba fampianarana, ary naneho ohatra ho an'ny tsy miankina mpamatsy vola. Ny pirenena korontana ny 1640 ny 1660, ary ny kely indrindra ambaratongam- 1688-89, nitarika ny korontana ao amin'ny fotoana sy ny fitsipi-pifehezana, fa Royal fitarihana ao ny endriky ny nahalala Filan-kevitry ny baiko, ary ny fangatahana ho fiakarana ho amin'ny fitsarana ny olona voatendry (fe-potoana diplaoma) Nitohy hatramin'ny fiandohan'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo.
Fanontam-pirinty efa nanoratra tany Cambridge ao amin'ny 1520s sy ny Royal Satan'ny in 1534 nanome ho an'ny Oniversiten'i ny hery mba hilaza (na ny fahazoan-dalana) telo mpanonta (stationers) izay ny pirinty sy mamoaka asa izay nankatoavina. Dimam-polo taona iray hafa dia ny teo anatrehan'i tombontsoa izany dia ampiasaina tsy tapaka ary farany lasa ho any an-University Press. From 1584, Nanomboka ny boky tsy tapaka eo ambany ny tombontsoa University ary nanohy hatrany mihoatra na latsaka, nefa tsy hahatratra ny tena hery mandra-Richard Bentley ny fandaminana indray tao anatin'ireo folo taona farany tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo tamin'ny nanome hevi-baovao sy ny karazana. Ireo fanatsarana namela ny University Press in noho Mazava ho azy fa ny hitrandraka bebe kokoa ny ampihimamba ny Baiboly, izay nizara pirinty tamin'i Oxford sy ny 'Mpanjaka Printers', ary hamokatra tsy tapaka ny asa manan-danja ho amin'ny fampandrosoana ny ny fianarana. Ny Cambridge University Press mbola mitohy mandraka androany toy ny iray amin'ireo tranainy sy lehibe indrindra akademika mpitory eran-tany.
Ny asa matematika tamin'ny taonjato fahafito nanana ny voninkazo feno amin'ny asa ny Sir Isaac Newton (1643-1727), izay miaraka amin'ny mpanara-dia azy nanenjika siansa fanadihadiana ny karazan'olona rehetra. Izany no hita taratra eo amin'ny fananganana haingana ny Anjerimanontolo tsy miankina sy ny mpamatsy vola ny andian-professorships ho an'ny matematika (ny Lucasian), simia, astronomy (ny Plumian), Anatomy, Haizavamaniry, Haibolantany (ny Woodwardian), astronomia sy ny rafitsary (ny Lowndean), ary andrana filozofia. Ny profesora Nampirisika ny fandaharana ny fampianarana ao amin'ny University: izao no fotoana ny Botanic Garden sy ny Woodwardian Museum ny Nampisy dia naorina tamin'ny alalan'ny fanomezana manokana, ary ny Fanarahamaso natsangan'ny Trinity College. Mifanindran-dàlana amin'ny siansa izany asa, roa professorships arabo (Sir Thomas Adams sy ny Tompo Almoner ny), fitondran-tena ny filozofia (ny Knightbridge), mozika, maoderina tantara (Regius), maha-Andriamanitra (Norrisian) sy ny lalàna (fomba fisainana) dia naorina mba hihaona zavatra ilaina hafa.
Ny fifanjihirana sy opponencies ny lasa dia mifanaraka amin'ny fampianarana vaovao. Ireo vita ny dingana voalohany ny diplaoma no nalamina tamin'ny baiko ny mahamendri-balisoa, izay nanambara tao amin'ny Ash Wednesday. voly andininy, indraindray manesoeso, dia namaky teo ny lanonana fizarana diplaoma iray zokiny BA (na 'antitra licence') mipetraka, toy ny fahazoan-dalana adala, amin'ny telo manan-tongotra seza na tripod. Ara-potoana, ny fizarana diplaoma lisitra tonga ho natao pirinty amin'ny indray ireo andininy Tripos, ary nantsoina hoe ny Tripos lisitra.
Na dia eo aza ny vatsy ho an'ny siansa momba ny zavaboary sy ny zavakanto, avy tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-17, Matematika tonga hanjaka fampianarana ao Cambridge, ary amin'ny farany 'ny Tripos’ tonga hoe ny fandinihana amin'ny matematika. Izany dia natao tao amin'ny Antenimieran-doholona-trano, izay kandidà mety hanao ny tsara naka taratasy manokana ny 'olana', amin'ny voalohany ho azy ireo notononiny ny Moderators fa amin'ny 1800 miseho ho toy ny taratasy vita pirinty.
Ny University Library dia nitarina tamin'ny sisa amin'ny University nandritra ny taonjato fahafito ambin'ny folo tatỳ aoriana, ary rehefa afaka ny fanomezana avy George I ny sora-tanana sy ny boky ny Eveka John Moore, dia outgrew ny faritra am-boalohany ao amin'ny Taloha Sekoly. Drafitra dia efa milaza ho fanorenana ny Antenimierandoholona-trano manoloana ny Old Sekoly, ary izany tamin'ny farany vita tamin'ny 1730. Teo anelanelan'ny daty io ary 1758 andiana fanovana sy fanamboarana ny trano taloha nanome toerana sy tsara tarehy Fittings ho an'ny Library, izay mahazatra amin'ny Rowlandson ny sary: Maro ny toe-javatra ankehitriny velona ao amin'ny University Library.
Fanampiny ho amin'ny foto-matematika fandaharam-pianarana dia natao ihany no tsikelikely: ny fandinihana ny LLB tamin'ny lalàna sivily niseho voalohany ao amin'ny 1816, ny kilasika Tripos Nanomboka tamin'ny 1824 ary, rehefa 1843, ordinands afaka maka ny fanadinana an-tsitrapo ao amin'ny teolojia izay mba hanana an-teolojika Tripos.
Ireo fiovana dia nanomboka nandritra ny fotoana ny fitondrana foibe ao amin'ny University, dia nitombo hery, ary nanitatra ny andianà fanovàna kely izay ho fototry ny ho avy fiovana. ny didy, ohatra, no voatendry ho amin'ny fotoana voalohany navoaka tao amin'ny dikan-pirinty in 1785, ary ny rafitr'ity tontolo ity, na tsy maharitra komity maharitra (Matetika no lazaina hoe izy tatỳ) nitarina mba handrakotra ny fanaraha-maso ny Estates (izay ny fanafiana masina ny vaovao efa be professorships omena), ary koa ny trano sy ny fikambanana toy ny Botanic Garden, ny Library sy ny Press.
Na dia eo aza ireo fivoaran-draharaha, Tamin'ny voalohany antsasaky ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia mitohy antso ho an'ny fiovana sy ny fanavaozana ao amin'ny University, izay hita taratra amin'ny ampahany ny hetsika ara-politika ao amin'ny firenena iray manontolo. Ny fifidianana ho Chancelier ny Prince Albert ny Prince vadin'ny in 1847 dia miresaka momba ny herin'ny ny hetsika ho an'ny fanavaozana, ary amin'ny 1850 ny Royal Vaomieran'ny notendrena mba hanontany any amin'ny anjerimanontolo roa fahiny Oxford sy Cambridge ny. Ny Vaomieran'ny ny tatitra nahatonga ny promulgation ny didy vaovao ho Cambridge ao amin'ny Oniversiten'i Cambridge Act ny 1856. Ireo didy ireo no be nohavaozina nanomboka ny tarehin'ny voalohany, fa ny endriky ny fitondrana izay vatana no mbola ho toy ny rafitra. Ny fahefana fara tampony ao amin'ny University tamin'ny voalohany dia ny Antenimieran-doholona, ny ny tenany rehetra ny nahazo diplaoma, miaraka ny Chancelier, Vice-Chancelier, ary ny mpitsabo.
Hery manan-danja rehetra izany dia tonga amin'ny fotoana tena ampiasaina 'ireo ny mpikambana ao aminy mihazona ofisialy toerana ambony ao amin'ny University na Colleges (ny Regent House), izay kosa mifidy ny ohatry ny mpikambana ao amin'ny mpanatanteraka tena, ny Filan-kevitra. Fandaharam-pianarana sy ny afa-po ny fanadinana dia ny andraikitry ny hafa voafidy vatana, ny Birao Foiben'ny ny toetsaina (izay nanomboka tamin'ny 1882), raha ny Financial Board (izao ny Komitin'ny Vola ao amin'ny Filan-kevitra) nataonareo tamin'ny kaonty sy ny fitantanana ny University ny toetry. Komity na ny birao voakasiky amin'ny fampianarana ao anatin'ny fitsipika tsirairay Lasa an-paika fahaizanareo nandritra ny adim-ady taona. Faculty tsirairay manana ny mari-pahaizana Mpitantana birao sy ny komity.
Ny fampidirana sy ny fandinihana ny vaovao fampianarana – trano ampahany amin'ny Cambridge fahiny hery amin'ny matematika – Nandroso haingana be araka ny Royal Commission ny 1850 efa nitatitra. Siansa momba ny zavaboary sy ny fitondran-tena siansa (izao filozofia) Triposes no nankatoavina ho toy ny tany am-boalohany 1851, ary ny eo anoloan'ny 1900 Triposes in lalàna, tantara, teolojia, Indian fiteny, taranak'i Sema (taty aoriana Oriental) fiteny, Moyen Âge sy ankehitriny (Eoropa) fiteny, ary mekanika Siansa (taty aoriana injeniera) ireo rehetra nametraka. Mba hanana ireo sampana vaovao ny fianarana maro ny vaovao na nohavaozina professorships no napetraky ny Anjerimanontolo tsy miankina sy ny mpanao soa, ny voalohany hoe ny Disney ny arkeolojia maha-mpampianatra ahy ao amin'ny 1851.
Ary ny isan'ny fampianarana orina hafa Lahatsoratra nijanona kely, ary indrindra undergraduate fampianarana nataon'ny mpampianatra, nanendry sy vola ny Colleges, na ny tsy miankina mpanazatra. Rehefa nitombo isa ny mpianatra nandritra ny farany ny antsasaky ny taonjato (matriculations Nitombo avy 441 in 1850 ny 1,191 in 1910), be zavatra ilaina nanampy ho-misy Colleges, telo tanteraka andrim-panjakana vaovao niseho nandritra ny taonjato (fomba fisainana, Selwyn sy St Edmund ny), ary maro ny ezaka natao mba hanome mora vidy tsy Collegiate tranom-bahiny ny sakafo karakaraina ho an'ny mahantra mpianatra. Ny ankamaroan'ireo tranom-bahiny ireny efa nanjavona talohan'ny 1900 (ny trano ny iray, fantatra amin'ny anarana hoe Cavendish College, ankehitriny nipetrahan'ny Homerton), fa vaovao ny fiaraha-monina tsy Collegiate nandray ny asany ary taty aoriana dia lasa Fitzwilliam College.
Resources for ny fianarana ny kanto, trano sy ny arkeolojia efa nomena, ambany ny sitrapon 'Sir Richard Fitzwilliam, noho ny fametrahana ny tranom-bakoka, izay mitondra ny anarany. An be kokoa andianà hevi no nampiantranoina tamin'ny taloha toerana ny Botanic Garden izay nifindra tany Hills Road, namela maimaim-poana ny faritra be ao ambadiky ny Free Sekoly Lane ho an'ny New Museums toerana. Ity tranonkala ity tonga trano ny Cavendish Laboratory ho an'ny fanandramana fizika, ary koa ny departemanta ny fanafody, simia, Haibiby, Anatomy, ary ny injeniera. Mandritra izany fotoana izany manerana ny arabe sasany tany am-boalohany ny ambiny noho ny fomba fisainana College azony namidy tamin'ny University ary nanome ny fomba fisainana Site toerana sy ny tranom-bakoka ho an'ny laboratoara ho an'ny zavamaniry, Haibolantany, fambolena, physiology sy ny arkeolojia ary ny anthropology, ary ny lalàna sekoly. The University Library, betsaka misokatra ao amin'ny Taloha sekoly toerana nandritra ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, outgrew ny tany am-boalohany, ary nifindra tao an-trano 1935 ho tsara tarehy trano vaovao andrefan'ny ony Cam miaraka amin'ny fanampiana ny tena Mitana benefaction avy ny Rockefeller Foundation.
'Extension lectures’ amin'ny faritany toerana ireo lafiny lehibe amin'ny Oniversite hetsika tamin'ny faramparan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Matetika izy ireo mifandray amin'ny ezaka mba hanomezana matihanina fampianarana sy ny fanadinana ho an'ny zazavavy amin'ny alalan'ny fanadinana an-toerana ho an'ny sekoly nomen'ny amin'ny Oniversiten'i Oxford izay mitohy amin'ireo. Fampiofanana ny lehilahy antokony nahazo diplaoma tany Cambridge mpampianatra nanomboka tamin'ny be andro izany, fa angamba ny tena lavitra dia lavitra vokatry ny hetsika dia ny fametrahana ao amin'ny Cambridge roa Colleges ho an'ny vehivavy mpianatra (Girton in 1869 ary Newnham in 1872). Avy voalohany, Colleges ireo natao mba hanomanana ny mpianatra ho amin'ny Tripos, ary ny vehivavy voalohany raha ny marina dia nandinika in 1882. Ezaka mba ho feno ny vehivavy mpikambana ao amin'ny University dia imbetsaka resy mandra- 1947. Avy amin'ny 1860s, Oniversite nanomboka tsikelikely mba hamela ny Fellows hanambady. Izany Nisy fiantraikany lalina eo Cambridge fiaraha-monina sy ny soridrefitany ny tanàna rehefa tonga trano haorina mba handraisana ny fianakaviana vaovao. Vitsivitsy ireo mpianatra efa mandroso niseho tao amin'ny University, indrindra fa ao amin'ny laboratoara, tany am-piandohan'ny taonjato faharoapolo, nahazo diplaoma teny, fa diplaoma, indrindra ny PhD, nanao miadana nanomboka araka ny fampidirana ao amin'ny 1921.
Organised fanatanjahan-tonga mitana toerana malaza anjara amin'ny fiainan'ny Colleges sy University taorian'ny 1851. Ny sambo-hazakazaka eo Oxford sy Cambridge sy ny adim-oniversite ny lalao cricket lalao Efa nanomboka vao maraina be, 1827, ary tonga isan-taona zava-nitranga in 1839. Mandritra izany fotoana izany, sambo langilangy, fanatanjahan-tena hafa fikambanana sy ny Inter-Collegiate fifaninanana (Lents sy Mays – atao hoe araka ny teny ao amin'ny izay nitranga – ary Cuppers) Lasa endri-javatra orina tsara ny eo ambanin'ny-nahazo diplaoma ny fiainana. The Proctors nanohy, izay mitohy amin'ny College manamboninahitra, mba hanara-maso ny filaminam-bahoaka sy hihazonana fananarana sy tokony homarihina fa mandra- 1970 natopatopan'ny dia simba teny an-dalana rehefa maizina ny andro rehetra mpikambana zandriny, sy oniversite nakatona ny vavahadiny tsara talohan'ny misasakalina.
Tamin'ny ady lehibe voalohany (1914-19), 13,878 mpikambana ao amin'ny University nanompo sy 2,470 no maty. fampianarana, ary ny saram izany azo, dia saiky ny nijanona sy ny olana ara-bola mafy nanaraka. Amin'ny maha-vokatry ny University-panjakana voalohany nahazo fanohanana mitohy amin'ny 1919, fepetra fanampiny teo ambonin'ny nanontany an ny loharanon-karena sy ny fikambanana, ary ny Royal Commission nanendry in 1920 Nanoro hevitra ny University (fa tsy ny Colleges) dia tokony hahazo ny fanao isan-taona Grant, ary tokony ho averina alamina mba handray ny andraikitra ho an'ny lahateny sy ny fampianarana azo ampiharina. Ny Colleges nihazona fanaraha-maso ny tsirairay ny fampianarana ny mpianatra sy ny fizarana ny andraikitra izany mitohy amin'izao fotoana izao.
Izany fotoana izany dia nahita ny haingana ny tahan'ny ny fampandrosoana ao amin'ny saika isaky ny tari-dalana. Ny lazan'ny Cambridge mpahay siansa dia efa niorina tamin'ny faramparan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo amin'ny Clerk Maxwell sy ny Darwins ankoatra ny hafa, ary rehefa afaka izany, dia hatrany amin'ny J. J. Thomson, Tompo Tompo Rayleigh sy Rutherford. Work nanao araka ny mpianany sy ny mpiara-miasa, nandritra ny Ady Lehibe Faharoa indrindra nitombo laza izany sy ny maro ny mpianatra manahy ny hampiasa ny laboratoara nirohotra ho amin'ny University sy ny fitomboan'ny isan'ny andrim-panjakana tohanan'ny governemanta-naorina teo an-tanàna (izay nanofa ho toy ny tanàna 1951). University sampan-draharaha sy ny fikarohana Institiota dia naorina ho faritra vaovao ny fianarana lasa, ary teo aminy fampianarana vaovao taranja.
Ny taona 1950 sy ny taona 1960 dia nahita ny mbola tsy nisy toy fanitarana ao amin'ny University ny fampianarana zavatra ilaina. Misy zokiolona departemanta sy sekoly ambony no nosoloana trano – ohatra, ireo for Simia sy Engineering – ary ny fitomboan'ny kanto fahaizanareo maharitra nahazo zavatra ilaina voalohany, indrindra fa ao amin'ny sarotra ny trano ao amin'ny Sidgwick Avenue Site. Development iray isam-paritra vaovao lehibe maneran-hopitaly atsimon'ny tanàna, farany fanoloana ny fahiny ny Hopitalin'ny Addenbrooke tao afovoan-tanàna, nanome ny fototry ho isan-karazany ny fitsaboana mifandray departemanta sy Institiota, anisan'izany ny vaovao Clinical Sekolin'ny Medicine. Fa ilaina ny toerana bebe kokoa noho ny mety ho hita ao amin'ny toerana tery afovoany nitarika ho fanaparitahana ny departemanta hafa, indrindra fa ny Cavendish Laboratory amin'ny toerana malalaka andrefan'ny Cambridge tamin'ny taona 1970. Ny andrefana Cambridge fanitarana mitohy amin'izao fotoana izao, ary ny faritra ity tranon'ny izao foto-drafitrasa maro anisan'izany ny Computer Laboratory sy ny Centre for Nanoscience.
Ara-tsosialy ary ara-kolontsaina hetsika tsy tsirambina, ary amin 'izany vanim-potoana maharitra foibe ara-tsosialy ho an'ny mpianatra nahazo diplaoma sy ny mpiasa – ny University Centre – dia naorina tamin'ny vola nomen'ny ny Wolfson Foundation, ny tanjona-nanao mozika sy ny fampisehoana efitrano sekoly naorina, indray amin'ny ampahany avy amin'ny benefactions, ny University Library no indray omena, ny fanangonana ny zavakanto ankehitriny ny Yard Kettle dia nahazo sy nitarina, ary ny tranainy indrindra Angletera University teatra, ny ADC, nanokatra ny Amateur Club Tsinjo in 1855, dia Nanofa ny University ary nohavaozina ho toy ny foibe ho an'ny tantara an-tsehatra undergraduate. Izany zava-nitranga toy ireny mitombo naneho ny fanentanana ny midadasika kokoa andraikitry ny University, na ny azy manokana ireo mpikambana sy ho amin'ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny.
More mifandray mivantana amin'ny asa ny fototry ny fampandrosoana dia antsoina hoe 'ny Cambridge tranga', ny haingana sy mahomby fitomboan'ny siansa ara-indostria ao anatiny sy manodidina ny tanàna, betsaka izany naka avy fikarohana natao tao amin'ny Anjerimanontolon'i laboratoara. Zava-dehibe amin'ny dingana ity dia ny fametrahana ny Cambridge Science Park ny Andriamanitra telo izay iray College, ny fanavaozana izay efa izao lehibe lavitra ny habeny sy izay efa nanaraka ny fivoaran'ny toe-draharaha mitovy hafa. Ny University Industrial ihany Mifandray Office nanomboka tamin'ny taona 1970 miaraka amin'ny fanohanana ny Wolfson Foundation, ary ankehitriny nivoatra tao an-Research Office.
Mandritra izany fotoana izany ny undergraduate nitombo isa ireo taorian'ny ady noho ny fieken-keloka ho mpikambana feno avy 1947 ny vehivavy mpianatra, araka ny fototry ny fahatelo vehivavy College, New Hall (1954, ankehitriny Murray Edwards College), ary koa ny fototry ny Churchill (1960) ary Robinson (1977). More revolisionera dingana nalaina tamin'ny taona 1960. Colleges vaovao efatra no naorina mba hanome Fellowships ho an'ny sasany ny tsy mitsaha-mitombo isa ny fampianarana sy ny fikarohana mpiasa, ary koa ny toerana ho an'ny fikarohana bebe kokoa mpianatra (Darwin, Wolfson, Clare Hall sy Lucy Cavendish). Ny sasany fanorenany be taona am-boalohany ny famaritana ny mifandray amin'ny University – Hughes Hall, St Edmund ny sy Homerton – dia nekena ho Colleges. Ny anti-panahy izao ny Colleges nanomboka niaiky ny vehivavy mpianatra ka nanendry ny vehivavy Fellows. Ary 'mpiara-ponenana’ dia mahazatra, fa telo Colleges miaiky mpianatra vehivavy ihany – Newnham, New Hall (ankehitriny Murray Edwards College), ary Lucy Cavendish.
In 2009, amin'ny Oniversiten'i Cambridge nahatratra manokana niavaka - 800 taona ny olona, hevitra sy zava-bita izay manohy hanova sy handray soa izao tontolo izao. Mankalaza ny tsara indrindra ny Cambridge ny manan-karena tantara sy miandrandra ny ho avy, ny University hita taratra eo amin'ny zava-bita marobe sy izao tontolo izao-miovaova hevitra teraka ao ny rindrina, avy ny fametrahana ny fototry ny fizika ho ny nahitana ny firafitry ny ADN; avy ny manova fisainana ny filozofa Cambridge lehibe, poety sy ny mpanakanto; ny fangadiana ny asan'ny Loka Nobel maro mpandresy.
Ny 800th taonan'ny dia nanamarika tamin'ny isan-karazany ny zava-nitranga sy ny tetikasa mandritra ny taona. Nasaina izahay mpiasa, Alumni, mpianatra, fiaraha-monina eo an-toerana sy ny mpiara-oniversite mba hankalaza aminay mandritra 2009.
An topy maso
Ny fanokafana naneno tao amin'ny taona hetsika nahasarika ny 10,000 mpitsidika afovoany Cambridge mba hijery ny bespoke lightshow - ny voalohany ho Cambridge. Ankoatra izany, eny an-dalamben'i Cambridge dia voaravaka sora-baventy maneho sary sy ny fifantenana ny daty avy ao amin'ny University, iray hafa ho an-tanàna voalohany.
Amin'ny fotoana ny Summer Garden Party in Jolay, ny fiaran-dalamby efa atao hoe ny Chancelier ho fahatsiarovana ny tsingerintaona, ny lightshow efa miverimberina ao Shina, ny Siansa Festival efa nankalaza 800 taona ny siansa ary an-jatony ny oniversite manerana izao tontolo izao, ary koa ny sekoly eo an-toerana ny ankizy, dia be atao soratra Amin'ny Taratasy ho An'ny Future. The Garden Party Nahasarika ny 9,000 mpikambana ao amin'ny mpiasa sy ny fianakaviany.
Efatra andro taty aoriana, ny Cambridge fampisehoana tao amin'ny BBC Proms mampiseho Cambridge kira, mpitendry mozika sy mpihira avy 16 Oniversite natao teo anatrehan'i HRH Ny Prince of Wales. By ny fararano, hetsika vaovao maro natao izany. Zava-nisongadina tafiditra: dia notendreny lalao tanterahana amin'ny alalan'ny sekoly eo an-toerana ny ankizy mitondra ny lohateny hoe 0-800 in 60 Minitra sy ny fitsidihana avy HM The Queen, nandritra izay nanome ny vaovao izy Regius maha-mpampianatra ahy ao Haizavamaniry. Quentin Blake, ny malaza sary nataon'i sy alumnus, nandray anjara iray vaovao mampiseho andiana asa tsara fantatra tarehimarika avy ao amin'ny University ny lasa. Tamin'ny volana Desambra, ny Empire State Building dia nandrehitra ho iray alina ao Cambridge manga.
On 18 Janoary 2010, katroka herintaona eo avy amin'ny zava-nitranga voalohany, ny taonan'ny dia namarana tamin'ny lightshow lehibe kokoa amin'izao fotoana izao mampiseho University fikarohana. Ny fandaharana nampidirina Mpanjaka, Clare, ary Gonville sy Caius Colleges ho any amin'ny lalana izay mandeha ao amin'ny Antenimieran-doholona nanomboka Trano sy nahasarika, fara fahakeliny 20,000 olona.
Kofehy roa lehibe ny kely-ambaratonga asa threaded ny alalan 'ny taona. Ny voalohany dia ny 2009 petra-bola, izay no tena fiara ho an'ny 42 "Ambany-up" fiaraha-miasa hetsika. Ny ankamaroan'ireo mpianatra ireo tarihin'ny; Ireto kosa no anisan'ny mpihira mozika ao amin'ny trano fiangonana, vaovao pirinty gazety sy ny fanabeazana vohikala, teatra vaovao sy ny herin'ny masoandro-Powered Eco-fifaninanana fiara izay nifaninana tany Aostralia.
Ny faharoa kofehy mihazakazaka ny alalan 'ny isan-taona dia Cambridge Hevitra, andiana ny feo sy ny horonan-tsary mampiseho Cambridge podcasts manam-pahaizana lehibe misimisy olana ankehitriny. Izany no lafiny iray monja ny fanatrehany vaovao lehibe ao amin'ny haino aman-jery vaovao, anisan'izany YouTube, mivelatra indrindra fa ny 800th taonan'ny fa mbola ho toy ny lova ho any amin'ny ho avy.
Ankoatra ny amin'ny 800th Taonan'ny, Cambridge ihany koa ny miaramilan'ny Darwin Festival, amin'ny izay ny fiainana sy ny asa Charles Darwin dia nankalazaina ho 2009 marika 200 taona nahaterahany sy ny 150 taona ny famoahana ny 'Ny Fiandohan'ny Karazan-javamananaina'. ny fety, izay natao tao amin'ny fahavaratra, nanasongadina ny lahatenin'i, adihevitra, fampisehoana, atrikasa, fampirantiana sy ny Tours.
Mba hahalala bebe kokoa momba ny fomba izay ny 800th Taonan'ny nankalaza ny lasa, ankehitriny sy ho avy ao amin'ny University, dia jereo ny sakafo eo amin'ny ankaviany-tanana lafiny.
Dia jereo ny Tatitra farany tamin'ny 800th taonan'ny komity mpitantana eto ambany.
Ianao ve mila midinika Oniversiten'i Cambridge ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Oniversiten'i Cambridge ao amin'ny Map
Photos: University of Cambridge ofisialy Facebook
University of Cambridge Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Oniversiten'i Cambridge.